सावधान ! यी हुन् बिहानै मोबाइल चलाउँदा हुने ७ समस्या - Everest Dainik - News from Nepal
सावधान ! यी हुन् बिहानै मोबाइल चलाउँदा हुने ७ समस्या
काठमाडौं: अहिलेको समयमा कोही पनि मोबाइल बिना बस्न नसक्ने भइसकेका छन् । मोबाइलले धेरै कुरामा सजिलो बनाए पनि यसको लत पनि बस्दै गएको छ ।
अहिले मानिसहरूले फोन यति धेरै प्रयोग गर्छन् कि राति अबेरसम्म मोबाइल चलाउने र बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि मोबाइल चलाउनु नै पहिलो काम भएको छ । बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइलको उपयोग स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै हानिकारक छ ।
आईटी इञ्जिनियर सयुज आचार्यले बिहान उठ्ने बितिक्कै मोबाइल प्रयोग गर्दा हुने रोग र अन्य खतराहरूकाबारे केही सुझाव दिएका छन् ।
मोबाइलबाट निस्किने किरणलाई लामो समय हेर्दा आँखाको दृश्यशक्तिलाई कमजोर पार्दै लान्छ । मोबाइलको किरण प्रत्यक्ष्य रूपमा आँखामा पर्ने हुनाले यसको असर टिभीको स्क्रिनको तुलनामा अझै कडा हुन्छ ।
ज्यादा मोबाइल प्रयोग गर्नाले आँखा र टाउको दुख्ने, गर्दन दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता समस्या निम्तिन सक्छन् । जुन यसले दिमागमा पार्ने असरको कारण बन्न सक्छ ।
याे पनि पढ्नुस नेपालमा दैनिक कति मोबाइल भित्रन्छन् ?
चिन्ता विना शान्तिपूर्वक आफ्नो दिनचर्या सुरु गर्नु उत्तम हुन्छ । यदि तपाईंले बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइललाई आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ भने फोनकल, म्यासेज, इमेल, रिमाइन्डर, सोसल मिडिया इत्यादिले भरिएको हुन्छ जसले चिन्ता र तनाव निम्त्याउन सक्छ ।
यदि तपाईं निद्राबाट ब्युँझ्ने बित्तिकै सोसल मिडिया हेर्न सुरु गर्नुभयो भने, दिमाग यसमा गाँसिएको हुन्छ र अनावश्यक जानकारीले भरिन्छ । तनाव र चिन्ताको साथ दिनको सुरुवात स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ ।
यदि तपाईंले बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल फोन हेर्ने गर्नुभयो भने, तपाईंले नचाहँदा नचाहँदै पनि चिढचिढापन आइ नै हाल्छ । बिहानको तालिकाको सुरुवात मोबाइलमा प्राकृतिक रूपमा आफसेआफ परिवर्तन हुनसक्छ ।
याे पनि पढ्नुस मोबाइल धेरै चलाउनु कति घातक? यस्तो भन्छन् विज्ञ
सुत्ने समयमा मोबाइल हेर्नु र उठ्ने बित्तिकै मोबाइल नै प्रयोग गर्दा अवस्था झन खराब हुनसक्छ । यसरी नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने मानिसहरू डिप्रेसनबाट ग्रस्त हुन सक्छन् ।
बिहान उठ्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न किसिमका समाचारहरू पढेर र हेरेर मानिस दिक्दारीमा फस्छ । अरूको जीवनशैली देखेर तिनीहरू निराश हुन्छन् र आफैंलाई तुलना गर्न थाल्छन् जसले प्रयोगकर्तामा डिप्रेसन निम्त्याउन सक्छ ।
– बिहानको नियमित तालिका पछि मात्र मोबाइल हेर्ने बानी गर्नु राम्रो हुन्छ । नारी मासिकबाट